KLM gbasaa netwọkụ Gulf States, na-agbakwunye Riyadh dị ka ebe ọhụụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » KLM gbasaa netwọkụ Gulf States, na-agbakwunye Riyadh dị ka ebe ọhụụ
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands • News • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
KLM Royal Dutch ụgbọ elu mara ọkwa na ọ ga-agbasa netwọọdụ ụgbọ elu ya na oghere Riyadh na Saudi Arabia. KLM ga-agbanwe oge ụgbọ elu maka ụgbọ elu dị n'etiti Amsterdam Airport Schiphol na Gulf States na Middle East. Riyadh bụ ebe ọhụụ ọhụụ maka Schiphol.
KLM ji nwayọ ma jiri nlezianya na-agbasawanye netwọkụ Europe na kọntinent. N'ime ime nke a, ebumnuche KLM na-enye ndị ahịa ya oke nhọrọ nke ebe ọ ga-ekwe omume. Gbakwunye Riyadh dị ka ebe ọhụụ ga-eme ka netwọk KLM dị ike na Middle East ma nyere aka mee ka ọ sie ike. Emeghe Riyadh pụtara mmụba n'ọtụtụ ebe, mana ọ bụghị n'ọtụtụ ụgbọ elu na-aga Middle East, n'ihi na a ga-ejikọta Riyadh na ebe dị ugbu a. Ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu KLM na-arụ ọrụ site na Schiphol dị anya site na ọkwa nsogbu pre-corona.
“Nchekwa nke ndị njem anyị, nkasi obi, ọdịmma na ahụike ka bụ ihe kachasị mkpa anyị. A na-ejikwa usoro nchekwa ndị ọzọ arụ ọrụ ụgbọ elu anyị niile iji hụ na nchekwa ndị njem anyị. Anyị wedara onwe anyị ala ka anyị soro n'ụgbọ elu ndị mbụ nke Europe na-ebighachi ụgbọ elu na Middle East, na-enye azịza njem na Paris, Amsterdam na gafere. Anyị na-ekele ndị ahịa anyị nke ukwuu maka ndidi ha na ndị isi metụtara maka nkwado ha na-aga n'ihu, "kwuru Yeshwant Pawar, Onye isi njikwa, Air France KLM, Gulf, Iran na Pakistan.